Ny fitantanana ny tontolon'ny haran-dranomasina ho an'ny faharetana dia ahitana ny fanohanana ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina sy ny asan'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny.
Ny vatoharan-dranomasina dia miatrika fandrahonana mbola tsy nisy toy izany manerantany. Mandritra izany fotoana izany, ny felan'ny vatohara dia mihamatanjaka hatrany ho toy ny fototry ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fiarahamonina miadana, ary fiantohana ara-tsosialy.
Ny fitantanana mahomby amin'ny haran-dranomasina dia nanjary lohahevitra lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka, ary misy paikady maro samihafa izay manampy amin'ny fiarovana ny karazam-borona biby ary hanamora ny fampiasana maharitra.
Ity fizarana ity dia mampiditra paikady fototra sasany ho an'ny mpitantana ny haran-dranomasina mba hamahana ny adin-tsaina eo an-toerana sy hanamafisana ny faharetan'ny haran-dranomasina manoloana ny fiovana manerantany. Raha mila fanazavana lalindalina kokoa dia raiso ny Coral Reef Resilience Online Course. Vakio a famaritana ny Mazava ho azy or misoratra anarana amin'ny Mazava ho azy.
Fanadihadiana momba ny haran-dranomasina ao amin'ny Dry Tortugas National Park, Florida. Sary © Jennifer Adler